Kuguqulwe isinqumo sesifundazwe esithinta uMasipala - Bayede News
Iqalile imbhikisho yokuqala konyaka yasemanyuvesi
UMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu (Cogta) kuzwelonke uguqule isinqumo soMnyango esifundazweni iKwaZulu-Natal sokufaka uMasipala iNquthu ngaphansi kukaMlawuli.
Isinyathelo sokuqala okufaka lo Masipala ngaphansi kukaMlawuli silandela izinsolo zokungalandeli imigudu efanele ngesikhathi kuqokwa iMeya uLindokuhle Shabalala.
UMasipala iNquthu ophethwe i-Inkatha Freedom Party (IFP) ngeke usuzokhishwa ngaphansi kukaMlawuli. NgoLwesihlanu olwedlule abameli boMnyango KwaZulu-Natal bathumelele lo Masipala incwadi ngesinqumo sikaNgqongqoshe kazwelonke uNkosazana MaDlamini Zuma.
Ngenyanga eyedlule uHulumeni wesifundazwe wafaka uMasipala waseNquthu kanye nowesifunda uMkhanyakude obhekene nezinkinga ngaphansi kolawulo lwesifundazwe. Kepha uMasipala iNquthu wabe sewufaka lolu daba enkantolo, wabuya wacela uCogta kuzwelonke ukuba ubhekisise lesi sinqumo sikaHulumeni wesifundazwe.
Phakathi kwezizathu ezathulwa uHulumeni wesifundazwe ukuthi lo Masipala wephule imithetho emayelana nokuqasha izimeneja eziphethe nokuthi indlela okwakhethwa ngayo iMeya uShabalala ayihambanga ngokomthetho.
IMeya ithe lesi sinqumo sikaHulumeni wesifundazwe sikhombisa ukuthi bathathe isinqumo esinokwenzelela ngokwezepolitiki.
“Sihambile saya enkantolo ngoba singenelisekile ngesinqumo esithathwe iKhabhinethi kanye noCogta oholwa uMphathiswa uSipho Hlomuka. Sabuka ukuthi uMkhandlu waseNquthu awufanelwe ukuthi ngabe ungena ngaphansi kukaMlawuli, sabuka fthi ukuthi eNquthu sinconywe uMnyango Wezezimali ukuthi isimo sezezimali sethu sizinzile, sanganeliseka sabona kunenhloso yezepolitiki ukufakwa kuMlawuli eNquthu,” kusho iMeya uShabalala.
Iqhube yathi: “Kuke kufuneke ukuba uNgqongqoshe kuzwelonke abanikeze igunya lokuthi bangaqhubeka nalolu daba wabe esethumela ithimba eHhovisini lakhe ukuba lizoziphenyela nalo ukuthi athi esekhipha isinqumo sokuba silethelwe uMlawuli abe ezinelisile. Abameli boMnyango babe sebesazisa ukuthi bacela singabe sisaya enkantolo ngoba isicelo sabo sokuthi sifakelwe uMlawuli asemukelekanga. Ngamanye amazwi uMlawuli ngeke esaba khona kuMasipala iNquthu.”
Okhulumela uCogta esifundazweni iKwaZulu-Natal, uNks uNonala Ndlovu, uthe basazoqhubeka nokuqapha nokweluleka lo Masipala ukuze wenze izinto ngokulandela umthetho.
“Sitholile umyalelo ophuma kuNgqongqoshe kazwelonke uNkk uNkosazana MaDlamini Zuma ukuthi kulesi sikhathi singewufake uMasipala waseNquthu ngaphansi kweSigaba 139 1(b) kodwa singawufaka kwese-139 1(a) okusho ukuthi ngeke sithumele noma sifake umuntu omele uMphathiswa uHlomuka ozothatha izinqumo ngoMasipala kepha okumele sikwenze njengoMnyango ukuthi sibe seduze nokusebenza kwawo, siwuqondise ekwenzeni izinto ukuba ngempela ulandele imigomo nemithetho efanele ukuze wenze kahle umsebenzi wawo,” usho kanje.
Ngenyanga eyedlule iNkantolo Ephakeme eMgungundlovu isigodlile isinqumo sayo ecaleni elifakwe i-African National Congress (ANC) eNquthu imangalela lo Masipala. I-ANC yaya eNkantolo yathi ukukhethwa kweMeya kwakuphambene nemithetho yemvalelwakhaya. UKhongolose eNquthu ukholwa ukuthi umhlangano woMkhandlu owaba khona mhla zingama-26 kuNdasa nyakenye kwakungafanele ukuba ubanjwe ngoba lwaselumenyezelwe usuku lokuvalwa kwezwe ngaphansi kweSigaba 5.
nguSiyethaba Mhlongo Mar 12, 2021